Warar Sheegaya in Sheekh Muqtaar Roobow Cali Abuu Mansuur uu isu dhiibay Dowlada Soomaaliya	| Salaan Media
Home Wararka Warar Sheegaya in Sheekh Muqtaar Roobow Cali Abuu Mansuur uu isu dhiibay...
Warar Sheegaya in Sheekh Muqtaar Roobow Cali Abuu Mansuur uu isu dhiibay Dowlada Soomaaliya
Warar aan wali la xaqiijin hasa ahaatee soo baxayay saacadihii lasoo dhaafay ayaa sheegaya in Sheekh Muqtaar Roobow Cali (Abuu Mansuur) oo kamid ahaa Saraakiisha sar sare ee Al-Shabaab xiligana baxsadka ka ah Amiirka Al-Shabaab uu isku dhiibay dhinaca Maamulka Dowlada ee Gobolada Baay iyo Bakool.
Ilo kusugan Gobolka Baay ayaa xaqiijiyay in Sheekh Muqtaar Abuu Mansuur iyo rag kale oo la socda in ay joogaan meel duleedka ka ah Magaalada Baydhabo ee Xarunta Gobolka Baay halkaas ay wadahadalo kula leeyihiin masuuliyiin katirsan Dowlada Soomaaliya ee kusugan Magaalada Baydhabo kuwaa oo kala hadlaya Abuu Mansuur sida laga yeelayo iyo sida arintiisa loo wajahayo.
Warar kale ayaa sheegaya in Abuu Mansuur uu magan galay iskuna dhiibay dhinaca Maamulka Dowlada ee Gobolada Baay iyo Bakool inkastoo aysan jirin cid si rasmi ah Warkaasi u xaqiijisay hasa ahaatee ay tabiyeen qaar kamid ah Warbaahinta Muqdisho.
Masuuliyiin katirsan Dowlada oo kusugan Magaalada Baydhabo ayaa ka meer meeray ka hadlida arintan ku saabsan in Sheekh Muqtaar Roobow Abuu Mansuur uu isku soo dhiibay , waxa ayna sheegeen in wali wadaan xaqiijinta warkaasi Saxaafadana dib ugala hadli doonaan.
Maalmihii ugu dambeeyay waxaa baxsad ku jiray Saraakiil iyo Hogaamiyaal sar sare oo katirsanaa Al-Shabaab kuwaa oo ka cararay Amiirka Xarakada Al-Shabaab SheekhMuqtaar Abuu Zubeyr oo loo yaqaan Axmed Godane kadib markii Amiirka uu bilaabay beegsiga Saraakiisha kasoo jeeda siyaasadiisa .